संघीयतामा “गिभ एन्ड टेक” कदापि हुँदैन :: a1nepal.com.np
संघीयतामा “गिभ एन्ड टेक” कदापि हुँदैन
केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, एमाले
Published Date: January 12, 2015
एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित आफ्ना एजेन्डा छोडेर कांग्रेसको एजेन्डा ग्रहण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
संविधान निर्माणको नौबुँदे अवधारणा एमाले, कांग्रेस, राप्रपा र अरू दलको पनि साझा हो । देश भाडमा जाओस्, आफ्नो कुरो माथि पार्नुपर्छ भनेर बनाइएको अवधारणा होइन यो । संविधान बनाउनुहुँदैन भन्नेहरू अहिले नौबुँदे साझा अवधारणाभित्र कसका कुन–कुन एजेन्डा परे भनेर कोट्याइरहेका छन् । संविधान बनाउन एक ठाउँमा उभिएका दलहरूलाई फुटाउने उनीहरूको नियत हो । कांग्रेसका नेतासँग गएर सोध्छन्, तपाईंहरूले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, तर पूरै एमालेले लतारिरहेको छ नि, के भन्नुहुन्छ ? अनि एमाले नेताहरूसँग आएर सबै कांग्रेसको एजेन्डा परेका छन् नि, के भन्नुहुन्छ ? खासमा यी कसैका एजेन्डा होइनन् र सबैका एजेन्डा हुन् । देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउनुहुँदैन । फलानो जात तिलानो धर्म भनेर झगडा गराएर बितन्डा मच्चाउने, काटमार गराउने र विद्वेषको आगो झोस्ने गर्नुहुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्था चाहिन्छ, सबै जात, क्षेत्र, वर्ग, लिंगका नागरिकलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर बनाएको धारणा हो । हामीले ठूलो दायरामा यो धारणामा एकता गर्न खोजेका हौँ । देशको अहित हुनेबाहेक सबै विषयमा लचिलो हुँदा बनेको अवधारणा हो । अझ पनि हामी भन्छौँ– देशलाई अहित हुने, देशको नोक्सान हुने कुराबाहेक अरू कुरामा हामी अररो भएर बस्दैनौँ लचिलो हुन्छौँ । एमाले र कांग्रेसबीच झगडा गराउन खोज्नेले उठाएका यस्ता कुरामा एमालेका कुन र कांग्रेसका कुन मुद्दा परे भनेर दन्तबजान गर्नु जरुरी छैन । यो बहकाउने र संविधान बन्न नदिने कुराप्रति एमाले सचेत छ र कांग्रेस पनि सचेत छ । यो संयुक्त धारणा हो, यसलाई छुट्याएर नबुझौँ ।
लगातार दुईतिहाइले संविधान बनाउँछौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । तर, के अरू दलहरूले चुपचाप हेरेर बस्लान् ?
संविधान जारी गर्न एमाले र कांग्रेसलगायतका दलसँग आज होइन, पोहोर भएको चुनावका मितिदेखि नै दुईतिहाइ मत छ । हामीसँग दुईतिहाइ छ भनेर मुद्दामा सहमति नगर्ने अडान लिएर बसेनौँ । तर, अब सहमति नै हुँदैन भनेपछि त विधिमा जानै पर्‍यो नि । केही यस्ता छन् विधिको र प्रक्रियाको कुरा गर्नासाथ जसको सात्तो जान्छ । विधि प्रक्रियाको कुरा गर्दा हुकुमी शासनमा मात्रै हो सात्तो जानुपर्ने । लोकतन्त्रमा त संविधानले के भन्छ, ऐनले के भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र प्रक्रियाले के भन्छ, त्यसलाई पो मानिन्छ । तर, यहाँ मैले जे भन्छु त्योअनुसार चल्नुपर्छ, संविधानअनुसार चल्ने ? पेल्ने ? दुईतिहाइले पेल्ने ? भन्ने कुरा आइरहेको छ । संविधानअनुसार चल्ने कुरा ठीक कि संविधान कानुनअनुसार नचलेर एउटाले भनेअनुसार चल्ने कुरा ठीक ? संविधान जारी गर्न कम्तीमा दुईतिहाइ चाहिन्छ । सकेसम्म सहमतिमा गर्ने यत्रो कोसिस भइरहेको छ । सहमति भएन भने प्रक्रियामा गइन्छ भन्दा बलजफ्ती गरेको कसरी भन्न मिल्छ ? संविधानले, नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले दुईतिहाइमा गर भन्छ । दुईतिहाइ नै नपुगी अल्पमतले संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेको भए पो ए संविधानविपरीत बलजफ्ती गर्ने ? भन्न मिल्थ्यो ।
तर विरोधीहरूलाई स्पेस नै नदिने हो भने त झनै द्वन्द्व उत्पन्न हुँदैन ?
हो, स्पेस दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू मिडियामा खुब आइरहेको छ । स्पेस दिनुपर्छ, तर जनताबाट अस्वीकृत भएकाहरूलाई कति स्पेस दिने ? १० वर्षसम्म श्रीलंकामा एकछत्र शासन गरेका महिन्दा राजापाक्षेले चुनाव हारेपछि अब त्यहाँ कस्तो स्पेस पाउलान् ? भारतमा लामो समयपछि कांग्रेस आईले हार्‍यो, भाजपाले जित्यो । खै त, कांग्रेस आईलाई स्पेस दिइएको ? लोकतन्त्रमा संविधानबाहिरबाट स्पेस खोज्न सकिन्छ ? मिल्छ सहमतिमा गरौँ, मिल्दैन संविधानले भनेअनुसार गरौँ ।
संविधानसभा कब्जा गरेर, मार्सल लगाएर होहल्लाका बीच माघ ८ मा संविधान जारी गरिँदै छ भन्ने पनि चर्चा छ नि ?
होहल्लाका बीच मार्सल लगाएर संविधान जारी गर्ने भन्ने प्रचार गरिएको छ । ल, माघ ८ गते संविधान जारी गर्दा होहल्ला हुन्छ रे । अर्काे दिन जारी गर्दा सबैले मान्छन् ? होहल्ला हुँदैन ? सबै मुखमा टेप लगाएर बस्छन् ? कोही न कोहीले होहल्ला गरिहाल्छ । होहल्ला हुन्छ भनेर संविधान कहिल्यै जारी नगर्ने कुरा हुँदैन । कि होहल्ला गर्नेका मुखमा लड्डु हालिदिनुपर्‍यो । नत्र होहल्ला त जहिले संविधान जारी गरे पनि हुन्छ । मार्सल लगाउने कुरा पनि त्यस्तै हो । संविधानसभामा २५–३० जनाको दरबन्दी रिक्त रहेछ । त्यसमा भर्ना गरेपछि लौ अब मार्सल लगाएर संविधान जारी गरिने भयो भन्ने हल्ला चलाइएको छ । मार्सलले कुटपिट गर्न आउँदैनन् किन डराउने ? के अनुचित गर्ने तयारी गरिएको छ र ? कसैले संविधानसभामै भिड्ने भनेका छन् भन्ने सुन्छु । हामी भिड्दैनौँ, त्यहाँ बेल घेराउ गर्ने, व्यवस्था त छैन भने किन भिडन्त गर्ने ?
चार दलको बैठकमा मधेसी नेताहरूमाथि खनिनुभयो, त्यसले उनीहरूको अपमान भएको कुरा छ । मधेसी मोर्चाले तपाईंले माफी नमागेसम्म बैठकमै नबस्ने अडान लिएको छ । अब के गर्नुहुन्छ ?
कसैलाई कुन कुराले अपमान लागेको होला, कसैलाई अर्को कुराले अपमान लागेको होला । त्यसका पछि लागेर हुँदैन । दलहरूबीच छलफल गरौँ भनेर बैठक हुन्छन् । बैठकमा पालैपालो कुरा राखिन्छ । अरूले कुरा राख्दा म सुन्छु । कहिल्यै मैले भनेअनुसार त्यसले कुरा गरेन, मेरो अपमान भो भन्दै म उफ्रेर बाहिर निस्केको छु ? अकारण उनीहरू बाहिर जान्छन् । मनलाग्दी बोल्छन् । कहिले को सन्केर हिँड्छ, कहिले को । मैले बोल्दाबोल्दै उनीहरू बुरुक्क उफ्रेर हिँड्दा मेरो अपमान भयो कि भएन ? अपमान सहेरै बसेको छु । कोही सन्केर बाहिर जान्छ भने त्यसको जिम्मा म कसरी लिऊँ ? मैले बोल्दा सन्केर बाहिर निस्कनेले माफी माग्ने कि मैले ?
देशमा कम्तीमा जाति–जातिको, सम्प्रदाय–सम्प्रदायको विद्वेष भड्किने काम नगरौँ न भन्यो, महेन्द्रीय विचार भनिएको छ । पुराना कुरा गर्ने परिवर्तनविरोधी भनिएको छ । उनीहरूले जे भने पनि मैले बाहिर निस्केर मेरो अपमान भयो भनेको छैन । मेरो पुतला जलाउनेहरूलाई पनि मैले केही भनेको छैन । ठण्डी महिना हो एकछिन भए पनि साथीहरू आगो तापून् भनेर बसेको छु । मेरो अपमान भएकोमा उनीहरूले माफी माग्नुपर्ने हो । तर, मैले त्यसलाई सर्त बनाएको छैन । हामी आग्रह गर्छाैँ, आउनुस्, बस्नुस् । धम्क्याएर चल्दैन, त्यस्तो युग होइन यो । तर्क गर्नुस् तपाईंको कुरो कसरी ठीक हो ? तथ्य ल्याउनुस् । यो हो नि तरिका वार्ता गर्ने ।
तर, के गर्ने कहिले के कहिले के भन्दै निस्कनुहुन्छ । ए संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ? भनेर रिसाउनुहुन्छ । संविधानसभामा संविधान बनाउन पठाएको हो नि मित्र, यहाँ रक्तपात नगरौँ न भन्यो, ए महाराज हुने ? भन्नुहुन्छ । संविधानसभामा नियम–कानुन हेरेर सोहीअनुसार गर्ने कि रक्तपात गर्ने त ? यस्ता बलियाले त अखडामा खेल्न गए हुने हो । संविधानसभामा कसरी रगत बगाउने ? कि रक्तदान कार्यक्रम राख्नुपर्‍यो । कि खसीबोका काट्नुपर्‍यो । संविधानसभामा खसीबोका काट्न मिलेन, अरू त्यहाँ कसलाई काटेर रगत बगाउने ? हामीले त संविधान पो बनाउने हो त, रक्तपात मच्चाउने होइन । संविधान बनाउन बाहिरतिर गएर आन्दोलन, हडताल घोषणा गर्नुहुँदैन भन्यो भने झन् बुरुक्क उफ्रिनुहुन्छ । संविधान जारी गर्न कम्तीमा चार सय एकको समर्थन चाहिन्छ । चार सय एकदेखि ६ सय एकसम्म जति सकिन्छ धेरैको समर्थनमा जारी गर्ने संविधानमै व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यवस्था नियमावलीमा पनि छ । संसारैभर संविधानसभाले त्यसैगरी संविधान जारी गरेका हुन् । चार सय एकदेखि माथिको सम्भव भएसम्मको संख्याले जारी गर्ने हो संविधान । संविधानले यस्तो भनेको छ मित्र भन्यो, संख्याको धक्कु लगाउने ? हेप्ने ? भन्दै बाहिर निस्कनुहुन्छ । अब संख्याले हुँदैन भने किन चुनाव गरेको त्यत्रो खर्च गरेर ? सबैको समर्थन नभई संविधान जारी हुँदैन, होहल्लाबीच संविधान पारित गर्ने षड्यन्त्र हुँदै छ भनेर उचालिएको छ । संविधानले भनेअनुसार आवश्यक संख्या पुर्‍याएर संविधान जारी गर्नु षड्यन्त्र हो ? के अब संविधानले भनेअनुसार संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारी छोडेर मैले पनि रगतको खोलो बगाइन्छ भन्दै हिँड्नुपर्ने हो ?
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विन–विन सिचुएसनमा सहमति खोजौँ भन्दै आउनुभएको छ । तपाईंहरू कुन–कुन विषयमा लचिलो हुन तयार हुनुहुन्छ ?
विवादित विषयमा सहमति गर्ने कुरामा देशलाई अहित हुने गरी किमार्थ सम्झौता गर्दैनौँ । संविधान जारी गर्दा संघीयताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय आलुप्याज किनेजस्तो होइन । आलुप्याज किन्दा व्यापारीले ६० रुपैयाँ मोल्छ, किन्नेले ५० मा दे भन्छ । अब विन–विन गरौँ भनेर ५५ रुपैयाँ त्यहाँ अपनाउन सकिएला । तर, संविधानको हकमा यस्तो बार्गेनिङ कसरी चल्छ ? देशको हित के हो, देशको अहित के हो, त्यो छोडेर केको विन–विन ? केको गिभ एन्ड टेक ? देशलाई अहित हुने कुरा किन लिने ? देशको हितको कुरा किन दिने ? १० वर्ष हिंसामा बित्यो । त्यसपछिको १० वर्ष त्यसको व्यवस्थापनमा बित्दै छ । अब तलसम्म झगडाको बिउ रोपेर विद्वेष फैलाएर बिताउने ? माथि सधैँ नेता जम्मा भएर तल भिडाउने खेलमा अबको समय बिताउने ? संघीयताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुनै गिभ एन्ड टेक हुँदैन । देशको एकता खल्बलिन दिइँदैन । भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउन दिइँदैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्पमा कुनै कुरा मानिँदैन, नागरिकहरूलाई समानता, सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक विकासको आधार तयार गर्ने कुरामा कसैसँग सम्झौता गरिँदैन । कुनै पनि प्रभावमा परेर नेपाली–नेपालीबीच वैमनश्यता, साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा फैलाउने कुरा राख्न तयार हुँदैनाँै । अरू सबै कुरामा लचिलो छौँ ।
भनेपछि ५ जिल्लालाई मधेसमा गाभ्ने विषयमा तपाईंहरू कत्ति पनि सम्झौता गर्न तयार हुनुहुन्न ?
जातजातको राज्य र तराई, पडाड छुट्याउने कुरा त्यहाँका जनताको माग होइन । जहाँसुकै जानुस् जनताको कुरा त्यो छैन । अरूले बाहिरबाट भनिदिएको हो । पिँजडामा राखेको सुगालाई खाम पढ्न दिइएजस्तै यहाँ त्यो जनताको कुरा भनेर अरूले पढेर सुनाइदिएका मात्रै हुन् । यो त देशको एजेन्डा हो, देशको मुद्दा हो । चाहे जोसुकैले भनोस् देशको मुद्दामा एमालेले सम्झौता गर्दैन, अडान राख्छ ।
माघ ८ मा संविधान जारी गराएर प्रधानमन्त्री बन्न हतारिनुभएको छ भन्ने पनि चर्चा व्यपाक छ । कांग्रेससित तपाईंहरूको गठबन्धन कहिलेसम्म निरन्तर रहन्छ ?
माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने सहमति हामीले गरेका छौँ । हामीले गरेको सहमति नै संविधानका लागि हो । माघ ९ गते के हुन्छ ? कसको सरकार बन्छ भन्ने सोचेकासम्म छैनौँ । सुशीलजी १० वर्ष, २० वर्ष पक्कै हुनुहुन्न । हुनुभयो भने पनि त्यसपछि कोही त आउँछ, खाली हुँदैन । ज्योतिषीहरूले चिन्ता नगरेकै राम्रो हुन्थ्यो । हामीलाई माघ ८ गते संविधान चाहिएको छ, त्यसपछिको कुरा ९ गते बैठक बसेर गरौँला । ज्योतिषहरू केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन संविधान बनाउने हतारोमा छ भनेर खुबै मनोविश्लेषण गर्छन् । तिनै ज्योतिषीको चुनावी घोषणापत्रमा सहमति नभए पनि एक वर्षभित्र प्रक्रियामा गएर संविधान बनाउने भनेर लेखिएको छ । उनीहरूको घोषणापत्र पनि केपी ओलीले लेखेको होइन होला त । संविधान जारी गर्ने प्रयास गर्नेमाथि आक्षेप लगाउने कि जनतासँग गरिएको प्रतिज्ञा सम्झेर जिम्मेवार हुने मित्र † मेरो भनाइ जनतामा दलहरूको प्रतिबद्धता पूरा नभए निराशा बढ्छ भन्ने हो । निराश जनताको समूहलाई जसले पनि भड्काउन सक्छ । आशावादी जनताको समूहलाई परिवर्तनको काममा खटाउन सकिन्छ । के म राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दामा तटस्थ बसेको भए प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो थिएन होला ? मैले किन देशलाई अहित हुने मुद्दामा अडान लिएर बस्नुपर्‍यो ? कुनै लाभमा, पदमा पुग्न अरू कस्ता मान्छेले कस्ता कस्ता कुरा छोड्ने गरेका छन् ? मैले किन छोडिनँ ? यसबाट पनि बुझ्नुहुन्न र तपाईंहरू म के गर्दै छु भन्ने ? मेरो ध्यान संक्रमणकालको सही व्यवस्थापनमा छ ।
(एमालेद्वारा बल्खुमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिमा आधारित)
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित
सम्बन्धित पोष्टहरु फेला परेनन
← TOUGH talk with Chitra Bahadur KC	प्रक्रियाबाट संविधान बन्दैन, नयाँ शिराबाट सहमति गरौँ, माओवादी सचिव गुरुङ →
स्वर्गद्वारी प्युठान चौथो महोत्सवको तयारी तिब्र
“भ्यालेन्टाईन, ऐरी र उनी”
हिन्दु जागरण इजरायलद्वारा १४ फेव्रुवरी श्री स्वस्थानी सांग्य तथा महाशिवरात्रीको कार्यक्रम गर्दै
एनआरएए इजरायलले गर्यो माउन्ट हर्मोनमा भिजिट नेपाल २०२० को प्रमोशनल कार्यक्रम
किन विवादै विवादको घेरामा छ एन आर एन अष्ट्रिया ?
इजरायलमा पहिलो पटक राष्ट्रिय कलाकारहरुको उपस्थितीमा माघे सक्रान्ती पर्व मनाइदै
हिन्दु जागरण अभियान इजरायलले दैनिक रूपमा स्वस्थानी व्रतकथा वाचन गर्दै
यस्तो रहेछ इजरायलमा नेपाल आइडलको कार्यक्रम २० अप्रिलमा सर्नुको रहस्य (भिडियो सहित)
आध्यात्मिक प्रवचनकालागि भागवत वाचिका राधिका दासीजी इजरायलमा
बलात्कार मुद्दामा प्रहरीको भूमिका किन रहस्यमय, यसरी हुन्छ पैसाको खेल ? – POWER NEWS
ईराकमा वेचिएकी चेली सुरक्षित, नयां जिवन पाएको भन्दै आईन लाईभ । न्याय नपाउदा देशै छाडिन ईन्दीराले !
भुकम्प पुननिर्माण कहाँसम्म पुग्यो, सरकारले कति घर वनायो त – हेर्नुहोस् पुननिर्माण प्राधिकरणका सिइओ युवराज भुसाल
राष्ट्रियताकोलागि राज भन्दै राष्ट्रवादी नागरिक समाज